Akaụntụ XL - ỤLỌ NDỊ DỊ N'AKWỤKWỌ & Usoro | FXCC
Home / Akaụntụ XL - ỤWA NA NDỊ NA-AHỤ AKWỤKWỌ
Ozi Ndekọ XL - ỤLỌ NKWUKWU & Usoro:
Ị kwenyere na site na itinye aka na Nkwado a ("Nkwalite"), usoro ndị a na ọnọdụ ("Okwu") ga - ejikọ gị na FXCC's Agreement Customer Agreement na Ọrụ Ntanetị Ọrụ Nzuzo, nakwa yana usoro azụmahịa niile nke na-emetụta akaụntụ gị. Ikwesiri igosi okwu ndi a ma jiri nlezianya mara onwe gi ngosi ngosi ngosi.
Ndị ahịa kwesịrị ekwesị: FXCC ọhụrụ kpọmkwem Ndị ahịa nke na-emeghe ma na-akwụ ụgwọ akaụntụ ha na ego (ma ọ bụ ego ha kwụrụ ụgwọ) bụ n'etiti $ 100 US na $ 10,000 US.
Enweghị Ụlọrụ ma ọ bụ Swaps na XL Akaụntụ na nkwụnye ego na / ma ọ bụ nha n'etiti ($ 100 - $ 10,000).
Akaụntụ na nkwụnye ego na / ma ọ bụ nha ụtụ n'elu $ 10,000 ga-edozi na Akaụntụ Standard ma ga-edozi Commission & Swaps dịka edepụtara na ebe nrụọrụ weebụ FXCC n'okpuru mpaghara "Usoro ahia".
Ndị na-akwado nke nkwalite a nwere ike ịnweta naanị akaụntụ (X) trading XL.
Ogologo ntinye ego nke Akaụntụ XL na-adabere na ọkwa akaụntụ ahụ dị n'okpuru:
Nkwụnye ego na nha nhata n'etiti $ 100 na $ 3000: Na-eburu ya gaa na 1: 300
Nkwụnye ego na nha nhata n'etiti $ 3000 na $ 5000: Na-eburu ya gaa na 1: 200
Nkwụnye ego na nha nhata n'etiti $ 5000 na $ 10,000: Na-eburu ya gaa na 1: 100
Ogo ahia kachasị karịa onye Client kwesịrị ekwesị nwere ike imeghe n'oge ọ bụla agaghị agafe nzaa 10.
FXCC ga-enwe ikike, na ezi uche ya niile, ịnakwere ndị ahịa nke 3 kwalitererd otu na-akwado XL Account promotion. Ndị ahịa dị otú a na-aghọta ma kweta na a ga-etinye ụgwọ ọrụ mmeghe ọzọ ($ 5 kwa otu ihe nrite) na XL Accounts.
Ngosipụta ọ bụla nke ịme ihe, mmebi ma ọ bụ ụdị ọzọ nke aghụghọ ma ọ bụ nke aghụghọ na akaụntụ ahịa ọ bụla nke onye ahịa, ma ọ bụ njikọ ya ma ọ bụ jikọọ na akaụntụ XL ga-eme ka akaụntụ ahụ gharazie ịba uru niile a na-akwụ na / ma ọ bụ uru ọ bụla a rụpụtara n'okpuru Nkwado a.
FXCC nwere ikikere ịkwụsị akaụntụ XL ọ bụla ma ọ bụ gbanwee akaụntụ XL ọ bụla na "Akaụntụ Standard" na njikwa ya naanị, n'enweghị mkpa ịnye ihe ziri ezi ma ọ bụ kọwaa ihe mere eji kwụsị ma ọ bụ mgbanwe ahụ.
Mmegha ọ bụla, nkọwahie nke Usoro na Ọnọdụ ndị dị n'elu dịka ma ọ bụ ọnọdụ bilitere na nke Nkwado na Ọnọdụ ndị a kpuchiri, ụdị esemokwu ma ọ bụ nkọwahie a ga-edozi site na FXCC n'ụzọ ọ na-ewere dị ka onye kachasị mma nye ndị niile metụtara ya. Mkpebi ahụ ga - abụ nke ikpeazụ na / ma ọ bụ na - emegide ndị niile na - abata. Agaghị abanye akwụkwọ.
FXCC nwere ikike, ebe ọ bụ na naanị ya nwere ike iche na ọ dị mma, ịgbanwe, gbanwee, ịgbatị, kwụsị, kwụsị ma ọ bụ kwusi Nkwalite, ma ọ bụ akụkụ ọ bụla nke Nkwalite, n'oge ọ bụla ma na-enweghị ọkwa ọ bụla. Ọ nweghị ọnọdụ ọ bụla FXCC ga-akwụ ụgwọ maka ihe ọ bụla ọ bụla gbanwere, ngbanwe, nkwusioru, nhichapụ ma ọ bụ nkwụsị nke Nkwado.